Barnaamijyada Gaarka ah, 17 September 2013
Talaado 17 September 2013
Halkan waxaad ka daawan kartaan qayb ka mid ah Kulan dadweyn oo ay VOA ku qabatay magaalada Muqdisho. Kulankan ayaa waxaa marti ku ahaa Ra'isal wasaaraha Somalia, waxaana uu ku saabsanaa ka hortagga askaraynta caruurta.
IGAD oo la Kulantay Guddiga Doorashada Kenya
Wasiirada Arrimaha Dibada ee Wadamada IGAD ayaa maanta Nairobi ku soo gabagabeeyey shir ay ka yeesheen sida ay u socoto qabanqaabada doorashada Kenya, waxa ayna shirkooda ka dib la kulmeen Guddiga Doorashada ee Kenya.
Sawirro: Doorashooyinka Kenya 2013
Kenya waxaa 4-ta bisha March ka bilaabmaya doorashooyinka guud oo lagu soo doooranayo madaxweyne, baarlamaan, senate, badhasaabyo iyo golayaasha deegaanka. 8 Musharax ayaa u tartamaya xilka madaxtinimada.14 Malyuun oo Kenyan ah ayaa u diiwaangashan inay codkooda ka dhiibtaan in kabadan 34 kun xarumood.
Waa laba barnaamij oo gaar ah oo aan dib ugu eegeyno dhacdooyinkii ugu waaweynaa ee ka dhacay Soomaaliya iyo caalamka 2012.
Waa barnaamiyo taxane ah oo ka hadlaya Anshaxa Saxaafadda Soomaalida.
Barnaamijyo: Dhismaha Nabadda Soomaaliya
Waa barnaamijyo taxane ah oo aynu ku eegayno Dhismaha Nabadda Soomaaliya.
Barnaamijyo: Dilalka Weriyayaasha Soomaaliya.
VOA waxay halkan idiinku soo gudbinaysaa barnaamijyo taxane ah oo ka kooban afar qeybood kuwaaasoo ka hadlaya dhibaatada iyo dilka lala beegto weriyayaasha ka howlgalla gudaha Soomaaliya.